Soomaaliya oo u mideeynaysa ciideenkeeda dagaalka al-Shabaab - Sabahionline.com
Soomaaliya oo u mideeynaysa ciideenkeeda dagaalka al-Shabaab
Guddiga Wadaagga ah ee Ammaanka Soomaaliya ayaa Arbacadii (9-ka May) meel-mariyay qorshe lagu mideeynayo ciidamada xulafada la ah dawladda ee dagaalka kula jira al-Shabaab iyo al-Qaacida, sidaana waxa sheegay Africa Review.
Xoogagga ayaa ka hoos-shaqayn doonna hogaanka Wasaaradda Difaaca Soomaaliya. Guddiga oo labadii biloodba mar kulma, ayaa waxa uu ka kooban yahay wakiillo ka kala socda Midowga Afrika, Qaramada Midoobay, Urur-goboleedka IGAD, iyo dhinacyo kale. Shirka waxa kale oo goob-joog ka ahaa saraakiil ka kala socda Puntland, Galmudug iyo Ahlu Sunna Wal Jamaaca.
Ra’iisul-wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali, oo isagu kulanka shir-guddoominayay, ayaa taageeray qorshaha, isaga oo sheegay in taliska dhexe ee ciidanka uu awood u leeyahay in uu hoggaamiyo ciidamada.
Wasiirka Difaaca Soomaaliya Xuseen Carab Ciise ayaa kulanka ka dib saxafiyiinta u sheegay in ka soo qayb-galayaashu ku baaqeen in la dhiso xeryo millatari oo lagu xareeyo xoogagga dhawaan la mideeyay.